Makiinada korontada ku xiira iyo xumbada xiirashada ayaa hadda is waafaqaya | Ragga Stylish
Aakhiro dood ka dhexeysa mandiil koronto iyo makiinad makiinada garka. Ragga raadinaya hab xiiran oo deg deg ah oo raaxo leh ayaa doorta ikhtiyaarka koowaad. Si kastaba ha noqotee, xiirista caadiga ah ayaa aad ugu dhow oo lagula talinayaa si loo yareeyo cuncunka maqaarka. Kee doorbideysaa Ujeeddadu waxay noqon doontaa in la isku daro labada qaabba, iyadoo la ilaalinayo sida ugu fiican mid kasta.
Xiirane kuu oggolaanaya inaad ku beddelato xiirashada qallalan ee xiirashada qoyan adoo adeegsanaya xumbo ama jel? Tani hadda waxay suurtogal ku tahay shaver-ka cusub ee Phillips, oo ah hal-abuur suuqa ku dhacaya si loo daboolo baahiyaha xiirashada ee nin kasta. Waa nooca SensoTouch 3D, ah shaarka korontada ugu horeeya ee loo isticmaali karo xumbo ama jel xiirashada.
Warka ugu weyn ee ka imanaya Phillips xilligan waa xiiraha oo isku daraya raaxada xiiran ee qallalan iyo jilicsanaanta iyo fuuq-celinta caanaha Xiirashada cusbooneysiinta, waxaad marin kartaa jel ama xumbo, taas oo yareysa cuncunka maqaarka. Xiirashada deg-degga ah, waxaad u isticmaali kartaa xiiraha qallalan, qaab dhaqameed.
Haddii ay jiraan wax soo jiitay dareenkeyga ku saabsan shaarbahan cusub, waa naqshaddiisa, iyadoo xajin asal ah loogu talagalay in lagu hagaajiyo xakamaynta qalabka. Waxay umuuqataa mid raaxo leh. Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Makiinada korontada ku shaqeysa iyo xumbada xiirashada ayaa hadda isla jaan qaadaya